Dagaal joojintu waxay noqon karta mid ah khiyaali oo aan run ahayn ama mid fiiro dheeer leh oo dhasha xasiloooni iyo nabadgalyo. Dadkeeni hore eek u taliyey in la baabi'yo gumeeysiga ayaa dadaalkooda lagu qosli jiray, laakin waxay ku guuleeysteen arintaas inay daba galaan ilaa iyo intey ka baaba'iyso gumeeysugu.dalkeena, hadana ay ka shaqeeynayaan dalkeena iyo aduunkaba si dii loga baa'bin laha iyo siyaasadeena dibadeedba. Waxaanu markasta kahortageeyna dagaalada ama dhibaatooyinka sammeyn kara dhinac kasta nolosheena. Hadeey noqoto ka hortaga dhibaatooyinka ama nabad keenida. Sida aan ka yeelo aduunyada aan ku noolahay waxay saameeyneeysaa inta aduunyadu ay jireeyso. Siyaasadeena dibada iyo muraadjkeenu waxa weeyee inaan nabada ilaahay aan ka dhalino hada aduunkan aan ku noolnahay.